Koh Kham Island any Thailand ~ Journey-Assist - Review. Ahoana ny fomba hahazoana, vidiny.
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Pattaya » Nosy Koh Kham (Emerald Isle)
Nosy Koh Kham Nosy emerald
24 martsa, 2020
Famantarana ny nosy
Nosy Koh Kham (Emerald Isle)
Ity dia nosy kely iray izay mirefy 35 km miala ny morontsirak'i Pattaya ary 1 km miala an'i Koh Mak ihany ihany. Manana ny anaram-bosotra hoe "Emerald Isle".
Tsy mitombina ny fitetezana an'io nosy io raha tsy misy fakantsary. Tsara tarehy izy. Ary io hatsarana io dia mendrika hakarina.
Ireo tovolahy avy any Myanmar dia miasa ary mipetraka ao amin'ny Koh Kham. Manompo mpizahatany izy ireo, mivarotra zava-pisotro sy manadio fako.
Nosy Koh Kham amin'ny sarintany
Fotodrafitrasa sy fialamboly ao amin'ny nosy Ko Kham
Nosy Koh Kham. Hanao inona
Ny nosy dia mitoetra ao amin'ny faritra fikajiana, ka tsy misy skuter, akondro, parachutes ary maro hafa amin'ny fialamboly. Amin'ny ankamaroan'ny tranga, mpizahatany tonga eto mba haka sary mahafinaritra, miala sasatra amin'ny tora-pasika tsara tarehy ary milomano amin'ny rano mazava.
Kohiby dia manana minibar iray i Koh Kham izay mivarotra zava-pisotro sy zava-tsotsotra tsotra toy ny sakamalaho sy mofomamy. Mandritra izany fotoana izany, ny vidin'izy ireo dia avo roa heny na avo telo heny noho ny any amin'ny tanibe. Araka izany dia nanolorana azy fa hitondra ny sakafonao sy ny zava-pisotro any amin'ny nosy ianao. Tsy misy fivarotana ao amin'ny Koh Kham.
Ny fotodrafitrasa eto dia tsy misy fivoarana. Tsy misy mahasintona. Na izany aza, misy morontsiraka akaikin'ny pier, misy trano maromaro hofaina.
Ao amin'ity nosy ity dia misy amoron-dranomasina 2 ihany no mifindra tsara. Tsy manana anarana izy ireo. Manakaiky ny serfa dia misy sipa maro be tsy miloaka masoandro. Misy ihany koa ny trano fidiovana malalaka sy trano fandraisam-bahiny tsy mbola vita, izay efa ela nandao sy voaroaka tamin'ny zavamaniry tropikaly.
Ahoana ny lalana mankany Koh Island
Manomboka ao Koh Mak ka Koh Kham, dia miverina imbetsaka isan'andro ny sambo. Ny elanelana misy eo amin'ireo nosy ireo dia mandresy ny asa tanana toy izany ao anatin'ny 15 minitra.
Ny fividianana tapakila mialoha dia tsy ilaina. Tokony ho tonga any amin'ny fivarotana Ko Mak Resort ianao ao anatin'ny 15 minitra alohan'ny hivoahana ary hividy tapakila.
Mitentina 300 baht. Ity vidiny ity dia ahitana ny vidin'ny sambo miverimberina, ny vidin'ny zava-pisotro nomena rehefa tonga (rano mineraly na Coca-Cola) ary ny saram-pidirana ho any amin'ny nosy mitokana (ity farany dia 200 baht amin'ireo 300 ireto).
Ny tenako ho any amin'ny Koh Kham Island
Afaka manofa kayak amin'ny Ko Mak sy milomano ihany koa ianao. Fa amin'ity tranga ity dia tsy maintsy mahatsiaro fa ny onjan-dranomasina any an-dranomasina eo anelanelan'ireo nosy ireo dia tsy mahalana akory. Ary mbola, tsy maintsy mandoa vola baht 200 ianao amin'ny fidirana amin'i Koh Kham.